Umgangatho Ihowuliseyili laminate umgangatho imibala parquet yoMvelisi kunye noMthengisi | Moyo
Ubukhulu: I-806X403mm, 1214x296mm
Ubukhulu: 1214x406mm, 1220x301mm
Ubukhulu: 10mm 10.5mm 12mm
Li-aminate flooring (ekwabizwa ngokuba yi-floating wood tile e-United States) yimveliso yokuthambisa enemigangatho emininzi edityaniswe nenkqubo ye-lamination. Umgangatho weLaminate ulingisa ukhuni (okanye ngamanye amaxesha amatye) ngomaleko wokufota osebenza phantsi komaleko okhuselayo ocacileyo. Maleko engaphakathi engaphakathi ngokuqhelekileyo iqulathe melamine nentlaka kunye nezinto ibhodi ifayibha. Kukho imigangatho yaseYurophu engu-EN 13329: 2000 echaza umgangatho wokugubungela iimfuno kunye neendlela zovavanyo.
Umgangatho olaminethiweyo ukhule kakhulu ekuthandeni, mhlawumbi ngenxa yokuba kunokuba lula ukufaka kunye nokugcina ngaphezulu kwendalo yemveli enje ngomthi onzima. Ihlala ixesha elide ngokufanelekileyo, isempilweni (iimveliso ezininzi zine-resin ye-antimicrobial resin), kwaye kulula ukuyigcina.
Imigangatho elaminethiweyo kulula ngokulula ukuba umnini khaya afake. Umgangatho olaminethiweyo upakishwe njengenani lolwimi kunye neeplanga zemijelo, ezinokucofa enye kwenye. Ngamanye amaxesha ukuxhaswa kweglue kunikezelwa ukulungiselela ukufakwa. Imigangatho yeplaminethi efakiweyo ngokwesiqhelo "iflothi" ngaphezulu komgangatho ongaphantsi komgangatho wegwebu / wefilimu, enikezela ukufuma- kunye neepropathi zokunciphisa izandi. Isithuba esincinci (1-10 millimeters (0.039-0.394 in)) sifuneka phakathi komgangatho kunye nayo nayiphi na into engashukumiyo efana neendonga, oku kuvumela ukutyibilika nokwanda ngaphandle kokuphazamiseka. Iibhodi ezisezantsi (iibhodi zokubaleka) zinokususwa zize ziphinde zifakwe emva kokubekwa komgangatho ogqityiweyo kugqityiwe ukucoceka, okanye i-baseboard inokushiywa endaweni kunye ne-flooring efakwe kuyo, emva koko izinto ezincinci zokubopha ezinje ngezihlangu okanye ikota enkulu -Ukujikeleza ukubumba kungafakwa ezantsi kweebhodi ezisezantsi. Ukusika ukusika kwiiplanga kudla ngokufuneka emaphethelweni nakwiindawo zokungena zekhabhathi kunye neminyango, kodwa abafaki bobuchwephesha basebenzisa i-jamb undercut saws ukusika isithuba kubude obuvumela ukuba i-flooring ingene phantsi komnyango wejamb .
Ukufakwa okungalunganga kunokukhokelela ekunyukeni, apho iibhodi ezikufutshane zenza imilo ye-V eqikelela ukusuka kumgangatho, okanye izikhewu, apho iibhodi ezimbini ezikufutshane zohlulwe omnye komnye.
Kubalulekile ukugcina i-laminate icocekile, kuba uthuli, ubumdaka, kunye namasuntswana esanti anokukrwela umphezulu wokuhamba kwexesha kwiindawo ezixinene ngabantu. Kukwabalulekile ukugcina i-laminate yomile kancinci, kuba ukuhlala amanzi / ukufuma kunokubangela ukuba iiplanga zidumbe, i-warp, njl. Ukuchitheka kwamanzi akuyongxaki ukuba zisulwe ngokukhawuleza, kwaye azivunyelwanga ukuba zihlale ixesha elide.
Iiphedi ezincamathelayo zivame ukubekwa ezinyaweni zefanitshala kumgangatho we-laminate ukuthintela ukukrwela.
Imigangatho yangaphantsi engenaglue engenamigangatho inokwahlulwa ngokuthe ngcembe, idale izikhewu ezibonakalayo phakathi kweeplanga. Kubalulekile ukuba "ucofe" iiplanga zibuyele kunye usebenzisa isixhobo esifanelekileyo njengoko izikhewu ziqwalaselwa ukuthintela ukungcola ukugcwalisa izikhewu, ngokwenza njalo kube nzima ukubeka endaweni.
Imigangatho engenamigangatho ye-laminate esemgangathweni isebenzisa iindlela zokudibanisa ezigcina iiplanga zidibene phantsi kwempixano engapheliyo ethintela ubumdaka bungene kumalungu kwaye awudingi "ukubetha" ngokudibana rhoqo.
Egqithileyo Umgangatho we-Ecomomic laminate floor EIR Series
Okulandelayo: Umgangatho weLaminate kwii-Wholesales kunye nochungechunge oluqhelekileyo